🥇 Codigosfreefire.gratis Policy Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah】
Waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan kukiyada aan isticmaalno qaybtan: Siyaasadda Kukiyada
Maqaallada ku jira boggan waxaa ka mid noqon kara waxyaabaha la galiyay (tusaale ahaan, fiidiyowyo, sawirro, maqaallo, iwm.). Waxyaabaha ay ku lifaaqan yihiin shabakadaha kale waxay u dhaqmaan si la mid ah sida haddii booqde booqday bogga kale.
Goobahani waxay ururiyaan laga yaabaa in macluumaadka kugu saabsan adiga oo isticmaalaya cookies, Cudarada statistics cid saddexaad oo dheeraad ah, oo ay ula socdaan aad is dhexgalka content in gundhig, oo ay ku jiraan raad aad is dhexgalka content gundhig haddii aad leedahay koonto oo waxaad ku xiran yihiin internetka.
Muddo intee ah waxaan haynaa xogtaada
Hadaad ka tagto faallooyin, faallooyinka iyo metadata-haadaba waala ilaaliyayaa si aan xad lahayn. Tani waa si aan si toos ah u aqoonsan karno una oggolaan karno faallooyin isdaba joog ah, halkii aan ku hayn lahayn saf saf ah.
Dhamaan dadka isticmaala boggayaga internetka (haddii ay jirto), waxaan sidoo kale ku kaydineynaa macluumaadka shakhsiga ah ee ay ku bixiyaan astaantooda. Dhammaan dadka isticmaala waxay arki karaan, beddeli karaan ama tirtiri karaan macluumaadka shakhsi ahaaneed wakhti kasta (marka laga reebo inayan beddeli karin magacooda magacooda). Maamulayaasha webka waxay sidoo kale arki karaan oo wax ka beddeli karaan macluumaadkaas.
Waa maxay xuquuqda aad ka qabto macluumaadkaaga?
Haddii aad ku leedahay xisaabta ama ka tagnay comments on website this, waxaad codsan kartaa in ay helaan faylka dhoofinta macluumaadka shakhsiyeed aan kaa hayno, oo ay ku jiraan xog kasta oo aad na siiyaa ah. Waxa kale oo aad codsan kartaa in aan ka saarno macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aanu kaa hayno. Tani kuma jirto wax xog ah oo looga baahan yahay in lagu hayo maamul, sharci ama ujeedo ammaan.
la xiriir: [emailka waa la ilaaliyay]